Moldavia: +1 Vote Fampielezan-kevitra Miroborobo Alohan’ny Fifidianana Ben’ny Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2011 14:55 GMT
Hiatrika ny fampiharana demokrasia hafa indray ny renivohitr'i Moldavia, Chisinau amin'ny Alahady 19 jona, ka ho hita eo ny lany amin'ny fihodinana farany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao an-toerana na ny liberaly na ny komonista .
Naparitaky ny vondrona bilaogera ny fampielezan-kevitra an-tserasera 1 Vote mba hanentanana ireo tanora handeha hifidy, tsy misy ifandraisana amin'ny safidiny izany.
Nieritreritra hanao karazana dihy fanentanana ireo bilaogera amin'ny Alahady eo amin'ny kianja Nationaly Chisinau. Manana feon-kira izy, manana dihy ka handihy miaraka amin'ny vatany izy ireo ary hanoratra +1 Vote. Mba ahafantarana fa ho lavorary izany, dia nisy famerenana natao tamin'ny Alakamisy 16 Jona ka tonga tao ireo tanora marobe, izay nahitana mpivady tanora, (sary sy horonan-tsary).
Naparitaky ny Bilaogera ny +1 Vote, fampielezan-kevitra antserasera
Naparitaka tamin'ny 15 Jona ny fampielezan-kevitra, nanamarika mpampiasa Facebook maromaro nanova ny sariny ao amin'ny mombamomba azy ho sary famantarana +1 Vote ny fampielezan-kevitra +1 Vote ary nahangona mpandray anjara antenaina maherin'ny 300 sahady tao amin'ny pejin'ny Facebook.
Nielimpatrana manerana ny fampahalalam-baovao lehibe ny fampielezan-kevitra ary niteraka adihevitra mafana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy.
Katya Poclitari naneho hevitra tamin'ny olom-pirenena namany:
Misy dikany isika tsirairay avy. Ny vato tsirairay avy misy dikany ary io +1 Vote io dia hisy lanjany lehibe sy hitondra fiovana ho antsika monina ao Chisinau –ho an’ ny vahoaka ao amin'ity tanàna mahafinaritra manankarena, be fanantenana ary miramirana ity.
PS: NY ZAVA-DEHIBE, aloha na aorian'ny dihy +1 Vote, aza adino ny mandeha mifidy.
Na dia nanamafy aza ny mpikarakara fa tsy misy firehana politika ny fampielezan-kevitra atao, dia toa lokom-pifidianan'ny antoko liberaly ny loko manga ampiasaina amin'ny sary famantarana. Tsy nanaiky izany i Eugeniu Luchianiuc ka nataony araka ny tiany ny lokon'ny sary famantarana +1 Vote: mena ( antoko komonista) ary manga (antoko liberaly), mba ho tsy misy firehana politika tanteraka:
Antenaiko fa handeha hifidy ianao. Anareo ny safidy, izany no mahatonga ny safidy misy.
Nata Albot nandeha namonjy fampielezan-kevitra +1 Vote, toy izao no antony:
Tombotsoa ho ahy izany, voalohany indrindra dia satria hanohy hipetraka ao Chisinau ao, tiako tahaka ny zavatra efa niainako amin'ny fanandramana ny aterineto izy ary indrindra indrindra koa satria tsy manimba na mandratra na iza na iza izy.
«Ataovy izany, Chisinau”, hoy i Andrei Fornea nanoratra :
Matoky antsika tanteraka aho. Andeha hiaraka hanao fanentanana!
Vadim Zgherea nandray anjara tao amin'ny fampielezan-kevitra, na dia mbola tsy ampy taona tsy mahazo mifidy aza:
Tsy mifidy aho, mbola tsy ampy taona aho. Tsy tonga hanamarina ny tenako aho, fa haneho fihetsika fotsiny ihany. Te handrisika ny vahoaka mba HIFIDY aho.
Alexandru Gurdila nahatratra ny taona ahafahany mifidy, saingy nisafidy ny tsy hifidy izy. Kanefa, mbola tonga tao amin'ny fampielezan-kevitra ihany izy:
Fantatro fa nanao fahadisoana amin'ny tsy fifidianana ben'ny tanàna aho. Hijanona tsy hifidy aho. Saingy tsy midika izany fa tokony hanao tahaka ahy ianao.
Anna Antonoff naneho ny safidiny:
Andeha hifidy aho!!!